केइली जेनरः कसरी बनिन् विश्वकै कान्छी अर्बपति ? यस्तो छ कथा ! - AJAMBARI
केइली जेनरः कसरी बनिन् विश्वकै कान्छी अर्बपति ? यस्तो छ कथा !
५ फाल्गुन,२०७५ 172 0
एजेन्सी — केइली जेनर २०१९ को अर्वपतिको सुचीमा विश्वकै कान्छी अर्बपति बनेकी छिन् । २१ वर्षकी केइली चर्चित रियालिटी स्टार किम कार्दशियनकी बहिनी हुन् । हालै मात्र अमेरिकी म्यागेजिन फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको २०१९ को अर्वपति सूचीले उनलाई विश्वकै कान्छी अर्बपतिको रुपमा चिनाएको छ । उनले २०१६ मा कस्मेटिक्स उद्योग स्थापना गरेकी केइलीले दुई वर्षमै ठूलो सफलता हासिल गरेकी छन् ।
मार्क जुकरबर्गको रेकर्ड तोड्दै विश्वकै कम उमेरकी अर्बपति बनेकी केइली जेनरका विषयमा विश्वव्यापी चर्चा चुलिएको छ । उनको कम्पनीले करिब नब्बे करोड डलर (१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि) को सम्पत्ति आर्जन गरेको फोर्ब्सले जनाएको छ । उनलाई ‘सेल्फ मेड’ अर्बपति भनिएको छ ।
केइलीले विगत तीन वर्षदेखि अनलाइन तथा विभिन्न ऐपमार्फत आफ्नो कस्मेटिक उत्पादन बिक्री-वितरण गर्दै आएकी छिन् । उनले अल्ट्रा नामक कम्पनीसित सम्झौता गरेपश्चात उनको कस्मेटिक एक हजारभन्दा बढी स्टोरमा बिक्री हुँदै आएको छ । कम्पनीकी मालिक केइली एक्लै हुन् । जम्मा २९ डलरको लिपिस्टकबाट कारोवारको सुरुवात गरेकी उनको कम्पनीको मुल्य अनुमानित नब्बे करोड डलर पुगेको छ ।
उनको आयमा यसरी नै बढ्यो भने तीन वर्षमै विश्वकै धनी महिलाको सुचीमा पर्नेछिन् र, उनले फेसबुका संस्थापक मार्क जुकरवर्गलाई समेत पछि पार्नेछिन् । मार्क जुगरवर्ग २३ वर्षको उमेरमा फोर्ब्सको अर्बपति सुचीमा पर्न सफल भएका थिए ।
उनी कुनै विपन्न परिवारमा जन्मेर ठूलो संघर्ष गरी यो स्थानमा आएकी भने होइनन् । उनको परिवार पहिलेदेखि नै सम्भ्रान्त हो । उनका बुवाआमा उद्योगी हुन् । केइलीको सफलतामा परिवारका सदस्यहरुको पनि ठूलो हात रहेको विश्वास गरिन्छ । तर, उनको सम्पत्ति बुवाको भन्दा ९ गुणा र आमाको भन्दा १५ गुणा बढि पुगिसकेको छ ।
यस विषयमा प्रष्ट पार्दै फोर्ब्सले भनेको छ, ‘केइलीको पारिवारिक विरासत आफ्नो ठाउँमा भए पनि उनको कमाईमा परिवारका अन्य सदस्यको हात छैन । उनी एक्लैले यो उपलब्धी हासिल गरेकी हुन् ।’ आफ्नै बलबुतामा अहिलेसम्मकै संसारको सबैभन्दा कान्छी अर्बपति बनेकी छन् अमेरिकाकी काइली जेनर ।
फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ को अर्बपति सूचिमा परेकी २१ वर्षीया जेनरले आफ्नो भाग्य शृङ्गारका सामानको व्यवसायबाट कोरेकी हुन्। उनको कम्पनी काइली कस्मेटिक्सले गत वर्ष मात्र आफ्नो बिक्रीबाट ३६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गरेको थियो। उनी चर्चित कार्ड्याशियन परिवारकी सदस्य पनि रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
एक्काइस वर्षमै अर्बपतिको सूचीमा पर्दा उनले फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकर्बर्गलाई पनि उछिनेकी छन्। कान्छा अर्बपतिका रूपमा सूचीकृत हुँदा जुकर्बर्ग २३ वर्षका थिए। जेनरले फोर्ब्सलाई भनिन्, “मैले यस्तो केही अपेक्षा गरेकी थिइनँ। मैले भविष्यको यस्तो लक्ष्य पनि राखेकी थिइनँ।” “तैपनि यस्तो सूचीमा पर्दा साँच्चिकै खुसी लागेको छ। कसैले आफ्नो काँधमा धाप मारिदिएजस्तो लागेको छ।”
६ बैशाख,२०७६0106
संसदमा आउन बाँकी रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको विधेयकमा झन धेरै आपत्तिजनक प्रावधानहरु...
३ फाल्गुन,२०७४0579
७ फाल्गुन,२०७४0625